Ukuchazwa ngu-Bohm kwi "Mona Lisa Defragged" | Izidalwa ezikwi-Intanethi
"UMona Lisa uzingcolisile" nguTyler Bohm kwi-acrylic kumthi kunye ne-plexiglass
Ubugcisa be-pixel o Ubugcisa be-pixelated ngoku buqhelekile ngenxa yemidlalo ethile yevidiyo ephawula lonke ixesha elinjengeMinecraft okanye inani elingenasiphelo leemidlalo ezishukumisayo ezizisa ulangazelelo oluthile kuthi thina bahamba iminyaka ye-80 kunye neye-90 koomatshini bemidlalo yevidiyo yezolo.
Ngesi sizathu sinokufumana amagcisa athile afunyenwe kubugcisa beepikseli ngohlobo lwe usizisele imisebenzi yoqobo neyantlukwano apho sisetyenziswa ngakumbi. UTyler Bohm ngomnye wabo kwaye uyasicaphula phambi ko «Mona Lisa defragged», umsebenzi owenziwe nge-acrylic kunye nemithi enesiqalo esikhulu kwaye inokuba yile ndawo ikhethekileyo yokuba indawo ilahlekile ofuna ukuba yindawo yokudibana. abahlobo.
Umbono ophambili kukwahlulahlula kwiindawo ezininzi ze- Nokuba ngumsebenzi onje Njengo Mona Mona. Njengalo msebenzi wobugcisa owenziwe nguBohm apho athe wachaphazela khona umbono esinawo malunga nobugcisa bepeyinti yamandulo.
Nangona inokubonakala ngathi bubugcisa be-pixelated umyalezo unokuba nzulu kwinto umntu anokuyiqonda kwasekuqaleni, ngakumbi ukuba sibeka ngalinye kula maqhekeza enza umsebenzi uphela kwaye inokuba ziiathom nganye ezenza imizimba yethu.
UBohm usisa kweminye imisebenzi yakhe ngale nto Uhlobo oluthile kwaye, ngamanye amaxesha, umdlalo wevidiyo kwiwebhusayithi yakho. Ukuba sijonga into efanayo edlulileyo kule migca siya kwenye ifomathi yamaphepha eNorway apho isitayile esithile sasetyenziswa kwi-pixel ukwenza uthotho loyilo kunye nentsusa.
Umbono okhethekileyo wexesha esingaqondanga sibe nosuku olumnandi ujonge isikrini esigcwele iipekseli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » "UMona Lisa uzingcolisile" nguTyler Bohm kwi-acrylic kumthi kunye ne-plexiglass
I-Emojis yabantu abadumileyo beWhatsApp
Guqula imixholo ye-WordPress kunye neeplagi ngendlela elula